Tsy fahazakana ilay odinkankana : ny menaka tamin’ny sakafon’ny mpianatra no olana | NewsMada
Tsy fahazakana ilay odinkankana : ny menaka tamin’ny sakafon’ny mpianatra no olana
Nilaza ny minisitry ny Fahasalamana, Andriamanarivo Lalatiana, omaly, fa mbola tsy lany daty velively ny odinkankana Vermox 500mg nozaraina ho an’ny mpianatra tany Toliara, araka ny fanahian’ny maro. Fanafody efa nozaraina isan-taona hanalana kankana ny mpianatra izany nefa tsy nahitana olana hatramin’izay. Nisy ny fidinan’ny tomponandraikitry ny Pharmaco-vigilance tany an-toerana taorian’ny tranga. Notilina ilay fanafody ary natao ny tombana samihafa. Rehefa natambatra ny vaovao rehetra azo, heverina fa ny sakafo (petits pois) nozarain’ny Pam ho an’ny mpianatra tany an-dakilasy mialoha ny nihinanana ilay odinkankana no nihoatra kely ny menaka ka nitarika ny effet secondaire (nandoa, fanina narary kibo). Niarahana tamin’ny Sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) ny fandinihana ny antony nahatonga ny tsy fahasalamana teo amin’ny mpianatra isorohana ny mety hiverenany amin’ny manaraka.
Nanamafy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Paul, fa nisy filazana 15 andro mialoha ho an’ny ray aman-dreny sy ny mpianatra momba ny fizarana odinkankana any an-tsekoly.
Tany Ampanihy, Sakaraha, Taolagnaro, Betioky tsy nahitana olana tsy fahazakana ny odinkankana ny mpianatra rehetra ary izay no nisarika ny sain’ny tomponandraikitra hitodika amin’ny sakafo nohanin’ny mpianatra mialoha ny nandraisana ny fanafody kankana.
Nizarana odinkankana avokoa hatramin’ny mpianatra teto Antananarivo. Tsy nohanin’ny mpianatra avy hatrany izany fa nasaina nentin’izy ireo nody ka anjaran’ny ray aman-dreny no nanapa-kevitra na hanome ny zanany na tsia.
Tsy nisy ny fitarainana hatreto ho an’ireo nanome izany odinkankana izany ho an’ny zanany
Nidina ifotony koa ny Pam sy ny BNGRC
Ankoatra izay, nidina ifotony tao amin’ny EPP Anketa ny tomponandraikitra avy amin’ny fandaharanasa manokana momba ny sakafo (Pam) sy ny BNGRC, ny alarobia teo, nijery akaiky ny zava-nisy. Niaraka tamin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny solontenan’ny minisiteran’ny Fahasalamana izy ireo tamin’izany.
Nihaona mivantana tamin’ny solontenan’ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny lehiben’ny fokontany ireto tomponandraikitra ireto nitondra fanazavana. Marihina fa mpianatra 74 amin’ny 288 no tsy nahazaka ilay odinkankana raha ny filazan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Tatiana A, Vonjy A
Une réponse à "Tsy fahazakana ilay odinkankana : ny menaka tamin’ny sakafon’ny mpianatra no olana"
Rakotoarisoa Maminiaina 16/06/2017 à 14:12
slt, na inona na inona fanazavan’ny ministera dia tompon’ andraikitra foana izy ireo satria tsy nandray ny andraikitra tandrify azy izy ireo.Ny fanomezana fanafody any an-tsekoly koa tsy tokony hifanerena, tokony hifampiherana @ ray aman-drenin’ny mpianatra.Mirary soa tompoko